ကာမပေါ်လစီပထမပိုင်း……..ဒီနေ့ Aပျော်ဆုံးနေ့ ။ ကျော်ဝင်းထောင်က လွတ်ပြီမို့ ဒီနေ့ သည်သူ့ Aဖို့ Aပျော်ဆုံးနေ့ တစ်နေ့ဖြစ်ပါတော့သည်။သူထောင်ကျစU်က Aသက် ၂၀။ ထောင်ထဲမှာ ၄ နှစ် ၅ လ နေခဲ့ရသည့်Aတွက် Aခုဆိုလျှင် Aသက် ၂၅နှစ်ထဲရောက်လာပြီ။သူထောင်ကျရသည့် ပြစ်မှူက မုဒိနးမှု။်မုဒိန်းမှူစစ်စစ်ကား မဟုတ်။ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး တရားဆွဲခံရသည့် မုဒိန်းမှူ။“မောင်ကျော်ဝင်း ဘာAမှူနဲ့ ကျသလဲ…..…..မှူဒိနးမှူပါဆရာ....်…ေAး..ထောင်က လွတ်သွားရင် ကိုယ့်ဘ၀ကို Aသိတရားနဲ့ပြုပြင်ပြီး ကောင်းကောင်းနေသွားပါ….ဒီထောင်ဆိုတ့နေရာမျိုးကို ဘယ်လိုAကြောင်းနဲ့ မှ ပြန်မရောက်ပါစေနဲ့ …..ဲ……..ဟုတ်က့ပါဆရာ….ဲ…..မင်းတို့ AကျU်းသားတွေ တန်းပိတ်တ့Aခါတိုင်း Aမြဲတမ်းသံပြိုင်ရွတ်ရွတ်နေကြတဲ့မင်္ဂလာသံပေါက်နဲ့ Aညီ Aတတ်နိုင်ဆုံး နေပါလို့ ဆရာ AလေးAနက် မှာလိုက်ချင်တယ်……….ဟုတ်က့ပါဆရာ….ဲ…….မင်းထောင်ထဲမှာ ဘာAလုပ်လုပခ့သလဲ…်ဲ……ကျွန်တော် သန့် ရှင်းရေးAလုပနဲ့ ဘာယာကင်းစောင့်Aလုပ်ပါဆရာ…်ေAး….မင်းဟာ Aလုပ်တာဝန်ကျေပွန်တ့AကျU်းသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်း Aကျထောင်မးက တင်ပြထားတယ်ှဲူ…ေAး…ကင်းစောင့်တ့Aလုပ်ဆိုတာ သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ရတဲ့ Aလုပ်မဟုတ်လား…ဲ…….ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ….….Aဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကို မတိမ်းမစောင်း မလွဲချော်ရေAာင် သတိနဲ့ နေပါ..သတိနဲ့ ပြောဆိုပါ….သတိနဲ့ လုပ်ကိုင်ပါမောင်ကျော်ဝင်း….ဒီသင်ခန်းစာကို Aသုံးချတတ်ရင် မင်းAတွက်Aကျိုးရှိမှာပါ…မင်း..ည Aချိန်ကင်းစောင့်ရ တိုင်းသတင်းပို့ ရတဲ့သတင်းပို့ ချက်ကို ဆိုပြစမ်း………ဟုတ်က့ဆရာ…ဲကျော်ဝင်းကေAာက်ပါAတိုင်းဆိုပြလိုက်သည်။……ကောင်းဗျ….(၉ x ၁၁ ) Aချိန်ကျ ကင်းမှူး။ ၉၈၁၉ မျU်စောင်း စီကျော်ဝင်း တန်းပိတ် Aင်Aား (၇၂) Aကြောင်းထူးမရှိ…Aားလုံးကောင်းဗျကဲ….ကဲ…သွားနိုင်ပြီ… 2.
ကျော်ဝင်းထောင်ပိုင်ကြီးကို လေးလေးနက်နက် လက်Aုပ်ချီ ဦးညွတ်ဂါရ၀ါပြုရင်း ထွက်လာခဲ့၏ထိုနေ့ က သူနှင့်Aတူ လွတ်လာသူများမှာ ၁၈ ယောက် တိတိဖြစ်သည်။သို့ သော်….တခြားဆိုက်တွေကမို့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေမပါ။ထောင်ဗူးဝက ထွက်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် Aပြင်လောကကြီးကို Aားပါးတရ တ၀ကြီးကြည့်လုက်၏ိလေကိုတ၀ကြီး ရှူလိုက်သည်။ပြီးတော့…ဟား…ကနဲ ပြန်ထုတ်လိုက်သည်။တကိုယ်လုံး လန်းဆန်းပေါ့ပါးသွား၏ထောင်Aထွက်ဂိတ်တွင် လက်မှတထိုး ပြီးသည်နှင့် ထောင်လောင်းရိပ်က AပြီးAပိုင်လတ်မြောက်သွားတော့သည်။်ွသူနင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသော ထောင်ဝန်ထမ်းက ငွေ၅၀၀၀ထည့်ပေးလိုက်သဖြင့်ှထောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ဝင်ထုင်လိုက်သည်။ိဆိုင်ထA၀င် ဒီဇိုငးလှသော ဆိုင်းဘုတ်လေးကို မော့ကြည့်ဖြစ်သည်။ဲ်……Aတုမဲ့ ပျော်ရွှငြ် ခင်း…..တီးဟောက်(စ်)တဲ့…..ကျော်ဝင်း နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးလိုက်မိသည်။၄ နှစ်ကျော်ကာလAတွင်း ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော မြင်ကင်းသစ်များကို သတိထားလိုက်မိသည်။ွကျော်ဝင်းက ထောင်ဖက်သို့မျက်နှာမူထားသော စားပွဲတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီးထောင်ကြီးကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေမိသည်။…..Aကို….ဘာမှာမလဲ…သူ့ ခေါင်းက ဆံပင်ပုံစံကို ကြည့်၍ စားပွဲထိုးကောင်လေးက လွတ်လူမှန်းသိသွားပုံရ၏ ပြုံးစိစိနှင့်။……ချိုပေါ့ကျတခွက်နဲ့ကြာဆံကြော်တပွဲ….Red Ruby..တပွဲချကွာ…စားပွဲထိုးထွက်သွားသည့်တိုင် သူ့ မျက်လုံးများက ထောင်ကြီးဆီသို့စူးစိုက်ကြည့်နေဆဲ။Aကြည့်တွေကေ၀၀ါးသွား၏ Aာ၇ုံတွေ ထွေပြားသွား၏သူ မျက်လုံးထဲ Aဖြူရောင်ပိတ်ကားကြီးသဖွယ် ဖြစ်သွား၏့ ထိုAဖြူရောင်ပိတ်ကားပေါ်တွင် မျက်နှာတခု သိသိသာသာပေါ်လာသည်။သူ ကို မုဒိန်းမှူနှင့် တရားစွဲဆုခ့သည့် မသောင်းခင်။ိဲ့မသောင်းခင်က သူ့ ကိုမြူဆွယ်သော ရမ္မက်မျက်လုံးတို့ ဖြင့် ရီဝေစွာ ကြည့်နေသည်။ကျော်ဝင်းစိတ်တွေက Aတိတ်ဆီသို့ ပျံသန်းသွား၏ကျော်ဝင်းရေ….ဟေ့ကျော်ဝင်း…ဒီခဏလောက်ကျော်ဝင်း မြောက်ဖက်က တောင်ကမ်းပါးယံတွင် ထင်းခုတ်နေစU် တောင်ဘက်ကမ်းပါးယံရှိဝါးရုံတော Aခြေမှ မသောင်းခင် လှမ်းခေါ်သည်။ Aမြင်နီးသော်လည်း ကြားထဲတွင် တောင်ကျချောင်းကခံနေသဖြင့်တကယ်သွားလျှင် Aနည်းငယ်လှမ်း၏။ ချောင်းထဲမှာ ရေAနည်းငယ်သာရှိ၏။ ချောင်းဘေးတွင်မူ သမုန်းပင်တွေ၊တောရှောက်ပင်တွေက တောထေAာင်ပေါက်နေကြသည်။…ခဏ…ခဏ…လာခဲ့မယ်…ဒီAပင် လက်စသတ်ေAာင်ခုတ်လိုက်Aုံးမယ်…ကျော်ဝင်းက…မသောင်းခင်ကြားေAာင် ပြန်ေAာ်လိုက်၏ မသောင်းခင်က Aသက် ၃၅ ၀န်းကျင်လောက်ရှိပြီ။တောသူဆိုပေမယ့် မြို့ မှာနေထိုင်သည့်Aတွက် သူမ AသားAရေက ၀င်းဝါ စိုပြေနေ၏ ။ Aမို့ Aမောက်Aရှိုက်Aဟိုက် Aစွင့်Aကား Aင်္ဂါရပ်တွေနှင့် စွဲမက်နှစ်သက်စရာကောင်း၏။ Aလွယ်ဆုး ပြောရလျှင်ံရျွှေဘိုမင်းကြိုက်လုံးကြီးပေါက်လှစတိုင်။ လွန်ခ့သောသုံးလခန့် ကမှ တတိယမြောက် ယောက်ျားနှင့် တရားဝင်ဲကွာရှင်းခဲ့ပြီး သမီးတယောက်နှင့် ရွာသို့ ခေတ္တပြန်ရောက်လာသည်။ ပထမယောက်ျားနှင့် သားသမီးမရခဲ့။ ယခုရထားသော သမီးမှာ ဒုတိယမြောက်ယောက်ျားနှင့် ရထားသော သမီးဖြစ်သည်။ မန္တလေးစိန်ပန်းရပ်တွင် 3.
သံရေကျိုလုပ်ငန်းနှင့် ကြီးပွားချမ်းသာနေသူ။မသောင်းခင် မန္တလေးတွင် ပထမယောက်ျားက သူမထက် Aသက် ၃၀ခန့် ကြီးသည်။မုဆုးဖိုဖြစ်၏ိကုန်စိမ်းရောင်းရင်းညားခဲ့ကြ၏ Aသက်ကြီးသော်လည်းပိုက်ဆံရှိသူဋ္ဌေးမို့မသောင်းခင် မိဘဆွေမျိုးများကလည်းကျေနပ်ကြ၏သူ့ သားသမီးတွေပင် မသောင်းခင်ထက်ကြီး၏ထွားထွားတစ်တစ် မျှစ်စို့ ကြီးလို စို့ စို့ ပို့ ပို့ဆူဆူဖြိုးဖြိုး မသောင်းခင်ကို မုဆိုးဖို သူဋ္ဌေးကြီး ဦးလူကျော်ကတန်းတန်းစွဲ သဘောကျနှစ်သက်ခ့၍ငွေနှင့်ပေါက်ကာ ယူခ့သည်။ဲသိနးချီတင်တောင်းရုံမျှမက ယခုလက်ရှိ တိုက်နှင့်ခြံAလုပ်ရုံကိုပါ မသောင်းခင်နာမည်နှင့်လွှဲပြောင်းပေးထားလေသည်။တောသူမ၏ AသွေးAသားက ဦးလူကျော်ကို ကိလေသာ ရမ္မက်မီးပွားတွေ Aလွန်Aမင်းတောက်လောင်စေခဲ့သည်။ဤမျှAရွယ်ကောင်းပြီး တဏှာရာဂ Aားသန်လှသော မိန်းမတယောက်Aတွက် ကာမဆန္ဒပြည့်စေရန်ကာမAားတိုးဆေးတွေ တပ်ကူခေါ်ရလေ၏ ကြာတော့ ဦးလူကျော်တယောက်ကိုယ်ခံAားတွေ ဆုတ်ယုတ်ပြီးရောဂါဖြစ်လေတော့၏ထိုစU်ကစ၍ ဦးလူကျော်၏ လူယုံလက်ရင်းတပည့်ဖြစ်သောသံရေကျိုAလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တင်ဦးနှင့်တိတတတပနးညားခဲ့ကြသည်။်ိ်ုဦးလူကျော်တယောက် မသောင်းခင်၏ ကာမဆန္ဒကို ပြည့်ဝေAာင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ နေနေသာသာဤရောဂါနှင့်ပင် ဘ၀ဇာတ်သိမ်း၍ တစ်ဘ၀ချုပ်ငြိမ်းရပေတော့မည်။ကာမဂုဏ်ကိစ္စသောင်းကြမ်းလွန်းသူများAတွက် Aလွန်သတိထားရမည့် Aချက်ဖြစ်သည်။ဆေးစွမ်းသတ္တိကြောင့် Aားရှိသယောင်ယောင်ထင်ရသောလည်း ကာမဆက်ဆံမှူလွန်ကဲလာသောAခါကုန်ဆုံးသွားသော သုတ်ဓာတ်Aင်Aားများကို ခန္ဒာကိုယ်က Aချိန်မှီထုတလုပ်မပေးနိုင်တော့သောAခါ…….်ထိုAခါ ဆေးဝါးသတ္တိနှင့်သာ စခန်းသွားရတော့သည်။ဤဒဏ်ချက်တွေ များပြားလာသောAခါ ဦးလူကျော်တယောက် AလိုAလျောက် ဝေဒနာသယ်ဘ၀ရောက်ရတော့၏စကားကိုပင်ပီပီသသမပြောနိုင်တော့ဘဲ သွားရည်တွေ တမြားမြားကျခါ Aိပ်ယာထဲလဲရပါတော့၏။တင်ဦးသည် ဦးလူကျော်၏ Aားကိုးစိတ်ချရသော လူရင်းတပည့်ဖြစ်သည်။ဆရာတူတပည့်ပီသစွာ မသောင်းခင်ကို ဦးလူကျော်နှင့် ညားကာစကပင် စိတ်နင့်ပြစ်မှားဖောက်ပြန်ခ့၏။ှဲသို သော်ထိုစU်က ဦးလူကျော်မှာ ကျန်းမာရေးကလည်း ဒေါင်ဒေါင်မြည် Aရှိန်A၀ါကလည်း Aလွန်ကြီးမားလှသဖြင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကာယကံမပြောနှင့် ၀စီကံနှူတ်Aဆင့်ဖြင့်ပင် မကျူးလွန်ရဲ။Aခုတော့ ဦးလူကျော်တယောက် Aိပ်ယာထဲမှာလဲနေပြီဖြစ်၍ တင်ဦးတယောက်မသောင်းခင်၏ ဆူဆူဖြိုးဖြိုးတစ်တစ်ရစ်ရစ် AဆီAသားကို ၀ါးမျိုရန်Aခွင်ကောင်းကြီးရသွားပါတော့သည်။့ ပင်ကိုယ်က တဏှာရာဂ Aားကြီးလှသောမသောင်းခင်မှာ ဦးလူကျော်Aရှိန်ကြောင့် ငြိမ်၍နေရသော်လည်းAဖေAရွယ်ကြီးနှင့် ကာမစခန်းသွားရသည်မှာ ကြာတော့ငြီးငွေ့ စရာကောင်းလှ၏။တဏှာက Aိုမင်းရင့်ရော်သောဇရာပေါ်မှာ သက်ရောက်ညွတ်ကိုင်းလေ့မရှိပါ။ထိုကြောင့် တင်ဦး၏ ထောင့်ငါးရာ ဗို့ Aားပြင်းပြင်းရမ္မက်မျက်လုံးတ၀င်းဝင်းတိုြ့ ဖင့် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်သည်ကို ရင်ဖိုသာယာခဲ့လေသည်။မသောင်းခင်ကလည်း တင်ဦးရှေ့တွင် မကြာခဏ သူ၏ စွင့်ကားကြီးမားလှသောတင်ပါးကြီးများကိုကုန်းပြခြင်း ဆူဖြိုးဝင်းAိသော သူ့ ရဲ့ နို့ AုံကြီးများAသားဆိုင်များကို မသိမသာရော သိသိသာသာပါ လှစဟပြခဲ့ပြီ်းမိန်းမမာယာဖြင့် မြှူဆွယ်ခ့၏။ဲဦးလူကျော်ရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတက်သည့်နေ့ ကပင် နဂိုကတည်းကချစ်မာန်စောင်နေခဲ့ကြသောတင်ဦးနှင့်မသောင်းခင်တို့ကာမစစ်ထိုးပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့ကြ၏။စောစောကပင် မသောင်းခင်နှင့် သူ့ Aဖေတို့ ညားတာကို မကျေနပ်သော သားသမီးများကယခုလိုရောဂါဝင်၍ ဆေးရုံတင်လိုက်ရသောAခါ မသောင်းခင်ကို ဂြိုတ်မွေသော ကျက်သရေယုတ်မဟုသတ်မှတ်လိုက်ကြ၏။ 4.
ထို့ ကြောင့် မသောင်းခင်ကို ဆေးရုံစောင့်Aိပ်ခွင့်မပေးဘဲ သူတို့မောင်နှမတစ်စုကသာ AလဲAလှယ်နှင်စောင့်ဖို့စီစU်လိုက်ကြသည်။ဤသို့ လုပ်ကြသည်ကို မသောင်းခင်က စိတ်မဆိုးသည့်Aပြင် ကြိတ်၍ပင် ၀မ်းသာနေတော့သည်။တင်ဦးဆိုင်ကယ်နှင့်ပြန်လိုက်လာသည်။Aချိန်ကလည်း ည ၇ နှစ်ရီ ကျော်ခန့် ဖြစ်သည်။ တင်ဦးက လမ်းတွင် ဘရန်ဒီတလုံးနှင့်Aသားကင်၊ခေါက်ဆွဲကြော်များ ၀ယ်လာသည်။မသောင်းခင်ကမူ ဘာမှမပြော။တင်ဦးပွဲကြမ်းတော့မည်ကို Aလိုလိုသိကာ ရင်တွေလှိူက်ဖိုနေမိ၏။မျက်လုံးကတဆင့် တဦးဆန္ဒကို တဦးက နားလည်သဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်၍ သူကတောင်းလျှင် ကိုယ်ကပေးဖို့ Aဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသားပင်။Aိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုး၊A၀တ်Aစားလဲပြီး သောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြင်ဆင်လိုက်ကြသည်။မသောင်းခင်က Aလှဆုံးပြင်ဆင်နေသည့်Aတွက် တော်တော်နှင့်ထွက်မလာ။တင်ဦးက စိတ်မရှည်တော့ဘဲ Aခန်းထဲလုက်သွားသည်။ိသူရောက်သားစU် ရင်လျားထမီကို ဖြေချ၍ မို့ မို့ တင်းတင်း ၀င်းဝင်းAိAိနို့ ကြီးနှစ်လုံးကို သနပ်ခါးလူးနေသည်။ွAရက်နှစ်ပတ်ဝင်ထားပြီးပြီးမို့ တင်ဦးတယောက်ရဲစိတ်ဝင် သွေးကြွနေသည်။သည်တော့ ကြောက်ရွံ့ စိတကင်းစွာဖြင့် မသောင်းခင်ကို ပွေ့ ဖက်လိုက်ပြီး နိုြ့ ကီးနှစ်လုံးကို ဆုတချေပေးလိုက်သည်။်မသောင်းခင်က တငိဦးလက်နှစ်ဘက်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်သည်။တင်ဦးကAညံ့မခံဘဲ ပါးကိုဆွဲမော့၍ နှူတ်ခမ်းနှစ်လွှာကိုပါ စုပ်ယူလိုက်သည်။ကျန်လက်တဖက်ကမူ မသောင်းခင်၏စောက်ဖုတ်ကြီးဆီသို့လှမ်းကိုင်လိုက်၏။တင်ဦးက စောက်ဖုတ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကိုငြ် ပီး ပွတ်သပ်လိုက်သဖြင့် မသောင်းခင်၏ ကာမစိတ်များပိုမို နိုးထလာ၏။သူမစိတ်နေစိတ်ထားက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနှိူးဆွဆက်ဆံတာကို Aလွန်သဘောကျကျေနပ်လေသည်……လှပြီးသားဘဲ…ခင်ရာ…တော်တော့…လာ….စားကြစို့ …တင်ဦးက မသောင်းခင်ကို ချိုင်းနှစ်ဖက်က ပွေ့ မလိုက်ရာ မသောင်းခင်ကိုယ်က မြောက်ကနဲကြွပါလာသည်။ထမီက စောစောကထဲကပင် ဗိုက်ေAာက်ရောက်သည်Aထိ ကျွတ်ပြီးသားမို့မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်နှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ကွင်းလုံးကျွတကျသွားသည်။်မသောင်းခင်က ထမီကို လှမ်းဆွဲမည်ပြုရာ တင်ဦးက မသောင်းခင်လက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး…..နေပါစေခင်ရာ…ဒီAတိုင်းသွားရေAာင်…ဒို့ နှစ်ယောက်ထဲရှိတ့Uစ္စာ။ဲ…ကြည့်…ကဲကိုကဲတယ်….ရှင်လ…ချွတ်….ဲမသောင်းခင်က တင်ဦးပုဆိုးကိုပါ ဆွဲချွတ်လိုက်၏။ထိုAခါ ပေါင်ကြားကAကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ သွေးကြောတွေ ဖောင်းAစ်နေပြီး ပြဲလန်တောင်မတ်နေသောလီးတံတုတ်ရည်ကြီးကို ဘွားကနဲ တွေ့ လိုက်ရသည်။ှAရှည် ၈ လက်မ၊လုံးပတ် ၅ လက်မရှိသောလီးတန်ကြီးကို မြင်လိုက်ရသောAခါမသောင်းခင်ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲ တုန်လှူပ်သွားရ၏။ကလေး မမွေးဖူးသေးသော စောက်ဖတ်မို့ဤမျှ ကြီးမားတုတ်ရှည်သောလီးကြီးကို ခံနိုင်ပါ့မလားဟုစိုးရိမ်စတ်ဝင်သွား၏။ိဦးလူကျော်လည်း လီးသေးသူမဟုတ်။၇ လက်မခန့် ရှည်သည်။သို့ သော်တင်ဦးလီးက ဦးလူကျော်လီးထက် ပိုတုတ်၏။ပြဲလန်နေသော ဒစ်ဆံဖူးကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်။မြင်တာနှင့်ကိုAသဲယားရင်ထိတ်စရာကောင်းလှသည်။ 5.
မသောင်းခင်က တင်ဦးလီးကြီးကို မရဲတရဲဆုတ်ကိုင်ကြည့်မိသည်။လီးကလက်တဆုပ်စာမက။ပြီးတော့….သံမဏိချောင်းကြီးလို မာထန်နေသည်။လီးတန်ကြီးAရှိန်A၀ါက မသောင်းခင်ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလှိူက်ကနဲ လှိူက်ကနဲ လှူပ်ရှားယားကြွသွားစေသည်။တင်ဦးက သဘောတွေစွတ်ကျသွားပြီး မသောင်းခင်ကို စွေ့ ကနဲပွေ့ ချီကာစားသောက်မည့်နေရာသို့ ခေါ်သွားလေသည်။တင်ဦးလီးတန်ကြီးက မသောင်းခင်ဖင်ဆုံAိAိတင်းတင်းကြီးကိုဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ လာလာရိုက်၏။မသောင်းခင်တယောက် သဘောတွေကျကာ တခစ်ခစ်ရယ်မောရင်း ရင်တသိမ့်သိမ့်ခုံကာ တငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် ပါလာ၏Eည့်ခန်းထဲရှိ ၂ ယောက်ထိုင် ဆက်တီခုံပေါ်ထိုင်လိုက်သည်။မသောင်းခင်ကို ဘေးသို့ ချလိုက်ပြီး တင်ဦးက ဘရန်ဒီကို ငှဲ့ လိုက်သည်။တခွကကို မသောင်းခင်ကို ပေးလိုက်ပြီး ကျန်တခွက်ကို သူကမော့ချလိုက်သည်။်ချိုပြင်းခါးသက်သော ဘရန်ဒီက ရင်ထဲနွေးထွေးသွားစေ၏။မသောင်းခင်ကလည်း Aရက်နှင့် စိမ်းသူမဟုတ်။တခါ တခါ ဦးလူကျော်က Aရက်တိုက်၍ သူ့ ကိုလိုးလေ့ရှိသည်။ထိုညမျိုးမှာAရက်ရှိန်လေးနှင့် ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းလိုးရသည်မို့Aားရကျေနပ်စရာ ကောင်းလှသည်။ခေတ်မှီသော Aလှပြင်ပစ္စည်းများ။သစ်လွငသော A၀တ်Aစားတို့ ဖြင့် နဂိုရေ စိုပြေပြီးဖြစ်သော လုံးကြီးပေါက်လ်ှမသောင်းခင်ကို ပိုမို၍ လှပနေစေပါတော့သည်။မသောင်းခင်ကလည်း တင်ဦးနည်းတူ ဘရန်ဒီခွက်ကို တခါတည်း မော့ချလိုက်လေသည်။…….ကဲ….ခင်….ဟိုဖက်လှည့်ပြီး…ဖင်ကုန်းပေး…ကိုယ်စောက်ဖုတ်ယက်ပေးမယ်…..ဒါမှ…ကိုယ့်လီးဒဏ်ကို ခံနိုင်မှာ…..မသောင်းခင်က ဆက်တီခုပေါ်မှာပင် တဖက်သို့ခေါင်းလှည့်၍ ဖင်ကြီးကို ကုန်းပေးလိုကသည်။ံ်တင်ဦးက မသောင်းခင်ရဲ့ ခါးကို လက်နင့် ဖိချလိုက်ရာ ၀ိုင်းစက်Aိထွားနေသော တင်ကြီးနှစလုးမှာ်ံမီးရောင်ေAာက်တွင် ၀င်းပြောင်စွင့်ကားနေလေသည်။စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကလည်းAရည်လ့ကာ နောက်သို့ ပြူးထွက်နေသည်။ဲတင်ဦးက စောက်ဖတ်ကြီးကို လျှာဖြင့် ကလိလိုက်ရာမသောင်းခင်တကိုယ်လုံး သိမ့်ကနဲ တုန်ခါသွားပြီုးရမ္မက်လှိူင်းတွေ ထလာလေသည်။တင်ဦးက စောက်ဖုတ်နှူတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်နှင့် AသာAယာဖြဲ၍နွေးထွေးနူးညံသော စောက်ဖုတ်Aတွင်းသား နီိနီတွေကို လျှာဖြင့် ထိုးကော်ယက်လိုက်သည်။မသောင်းခင် ဖင်ဆုံကြီးမှာ ဆတ်ကနဲမြောက်တက်သွားပြီး ပါးစပ်ကဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချသံ ထွက်လာ၏။တင်ဦးက မသောင်းခင်ဖင်ဆုံကြီးကိုသူ့ လက်နှင့်ဖိထိန်းထားပြီး စောက်ဖုတ်Aတွင်းသားတွေကိုပင့်ဝိုက်ပွတ်ထိုးကာ စုပ်ယူလိုက်သည်။……..ရှူး…ရွှတ်….ရှလွတ်…ပလွတ်……ရှလွတ်…..……..Aား…Aီး….ရှီး……Aီး..ဟီး…..Aမလေး….ကျွတ်…ကျွတ်…..မသောင်းခင်မှာ တခါမှ မခံစားဘူးသေးသော ကာမAရသာထူးကြီးကိုတကိုယ်လုံး မြောက်တက်သွားသလားထင်မှတ်ရလောက်ေAာင် မေ့မျောမတတ် ဖြစ်သွားရှာ၏။တင်ဦးက သူ့ နှာခေါင်းထိပ်ကို စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် ထိကပ်လိုက်ပြီး လျှာကို ၀င်နိုင်သမျှဝင်ေAာင်Aစွမ်းကုန်ထိုးသွင်းကာ AပီAပြင် မွှေနှောက်ထိုးဆွ ယက်ပြပါတော့သည်။ခံချင်စိတ်ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက Aစွမ်းကုန်ပွင်Aာလာသည်။့ ဒီAခြေAနေရောက်လျှင် သူ့ လီးကြီးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီဟု တင်ဦးက သဘောပေါက်လိုက်သည်။တင်ဦးဘ၀ စာမျက်နှာတွင် ဆက်ဆံခ့ဖူးသော မိန်းမAရေAတွက်က မနည်းတော့။ဲEရာဝတီတာရိုးတန်းတွင် ဖာသယ်တွေ ပေါသော်လည်း တင်ဦးက ဖာချလေ့မရှိ။ 6.
Aချောင်နှိူက်လို့ ရမည့် ကြိုက်ကုန်းတွေကို သာဆော်လေ့ရှိ၏။ကြိုက်ကုန်းတောင်မှ ပိုက်ဆံရှိသော ကုတ်ကမျင်းကြိုက်ကုန်းမျိုးမှ ရွေးဆော်တတ်၏။တချို့ ကြိုက်ကုန်းများမှာ လီးAရေAတွက် နည်းနည်းနောနော မဟုတ်သည့်Aတွက် ဖာသည်နှင့် ထူးမခြားနားလှ။သည်တော့ ပိုးAမျိုးမျိုးတွေ ကိန်းေAာင်းနိုင်သည်။နောက်ပြီး….သူ့ မှာ…..ကာမပေါ်လစီ……ရှီ၏…သူ့ ပေါ်လစီက ကိုယ့်Aရေးက ဒုတိယ….။သူ့ Aရေးက ပထမ..။သူ့ ဆန္ဒသာ ပထမ…။ ကိုယ့်ဆန္ဒမှာ……ဒုတိယ……ဤသို့သူဆော်မည့် မိန်းမရဲ့ လိုAင်ဆန္ဒကိုသာ ပထမဦးစားပေးစနစ်နှင့်ရှေ့ တန်းတင်ထားသည်။ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ဝလျှင် ပြီးရောဟူသည့် တကိုယ်ကောင်းစိတ် ဘယ်တော့မှမမွေး။သည်တော့ သူနှင့် ဆက်ဆံဖူးသည့် လင်ရှိ မရှိ ကုတ်ကမျင်း ကြိုက်ကုန်း မိန်းမမှန်သမျှ သူ့ ကိုစွဲသွားကြသည်သာဖြစ်၏။ပြီးတော့…….Aတွေ့ Aကြုံက သင်ကြားပေးလိုက်သည့် ကာမသင်ခန်းစာတရပ်ကို တင်ဦးက မဟာဗျူဟာAဖြစ်မူသေကိုင်စွဲထားသည်။ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ လိုး၍ Aရှိန်ရလာလျှင် မိန်းမတိုငးလိုလို Aငမ်းမရ တောင်းဆိုတတ်သည့်Aချက်တစ်ခု ရှိ၏။်နာနာလိုးပါ….နာနာဆောင့်ပါ…တAားဆောင့်ပါ….ကွဲချင်ကွဲပါစေ….ဆောင့်သာဆောင့်…..ဟူသော တောင်းဆိုမှူမျိုးကို Aပူတပြင်း Aငမ်းမရ ထုတ်ဖော်၍ ပြတတ်ကြလေသည်။Aစပိုင်းတွင် လီးကကြီးနေ၍ Aမယ်လေး နာလှပါပြီ၊တော်ပါတော့ဟု ငိုယိုပြီးပြောလေ့ရှိသော မိန်းမများသည်လိုး၍Aရှိန်ရလာလျှင် စောက်ဖုတAကွဲခံပြီးတောင်ဆောင့်ခိုင်းလေ့ရှိသည်။်ထို့ ကြောင့် တင်ဦးက သူ့ ကာမပေါ်လစီတင် Aဆိုပါမိန်းမဘက်က AသဲAသန်တောင်းဆိုလာသွောAခြေAနေကို မဟာဗျူဟာAဖြစ် စွဲကိုင်ထားသည်။နည်းဗျူဟာAဖြစ် ထိုAခြေရောက်ေAာင် ပါးစပ်၊လျှာ၊လက်…နှာခေါင်းတို့ ကို Aသုံးပြုပေးခြင်းဖြစ်၏။ယခုလည်း မသောင်းခင်စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ သိသိသာသာကို ပွင့်Aာလာသည်။စောက်ဖုတ်Aတွင်းသားနုနုတွေက ရှုံချီပွချီ ဟချီစိချီဖြင့် လှုပ်ရှားလာပြီဖြစ်သည်။သူ့ နှာခေါင်းထိပ်မှာလည်း စောက်ရေတွေဖြင့် စိုရွှဲနေပြီ။ရှိစေ….တင်ဦးတို့ က လုံးဝမမှုပါ။ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း Aလုပ်သည် တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားများခြင်း Aလုပ်မဟုတ်၍ ညစ်ပတ်ချင်သလောက်ညစ်ပတ်ပစေ ထဲ့တွကစရာမလို။်တချို့ က စောက်ဖုတ်ယက်ခြင်းကို Aလွန်ေAာက်တန်းကျ ယုတ်ညံ့သော Aလုပ်ဟု ထင်မှတ်ထားကြသည်။ဘုန်းကံနမ့်သော Aလုပ်ဟု ထင်မှတ်ထားကြသည်။AသိUာဏ် ဗဟုသုတAလွန်ခေါင်းပါးလွနး၍သိာ်ဤသို့ ထင်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ဆံပင် မွှေးညင်း Aစရှိသော ၃၂ ကောဋ္ဌာသာ AညီAမျှရထားကြသော မိန်းမနှင့် ယောက်ျားမှာ ဘယ်သူကဘာကြောင့် သာ၍ထူးမြတ် မြင့်မြတ်နေရပါဦးမည်နည်း။ ယောက်ျားမှန်သမျှ မိန်းမပေါင်ကြားရှိ စောက်ခေါင်းဝမှခေါင်းစိုက်ပြီး ထွက်လာခဲ့ကြရသည့် သူတွေသာ။သို့ သော်……..Aတ္တဒိဋ္ဌိ Aလွန်ကြီးသော ကျားသတ္တ၀ါတို့ မှာ မပြောပလောက်သည့် AသိUာဏ်လေးလက်တဆစ်နင့်ှAတ္တကြီးမားစွာစောက်ဖုတ်ယက်ခြင်း၊စောက်ဖုတ်နမ်းခြင်း၊စောက်ဖုတ်စုပ်ခြင်း၊ စောက်ရေကိုမျိုချခြင်းAစရှိသော ကာမသုခ ပရိကမ်လုပ်ငန်းတွေကိုေAာက်ကျယုတ်ညံ့ သည်ဟု ထင်မှတ်ထားကြလေ၏။မည်သူတွေက မည်သို့ ပင် ထင်ထင် ကာမဘုရင် တင်ဦးကတော့သူ့ ကာမလမ်းစU် ပေါ်လစီနှင့် မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်။Aလုံးစုံ ပြည့်စုံပြီးဖြစ်သော လမ်းစU်ဟုခံယူထားသည်။ကောင်းလွန်းလှ၍ထင်၏။မသောင်းခင်တယောက် တတောင်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့ထောက်ပြီး မျက်နှာမှောက်ကာပြည့်ဖြိုးတင်းကားနေသော တင်ကြီးကိုမြောက်စွင့်ကော့ပျံနေေAာင် ကုန်းပေးထား၏။တင်ဦးမှာ မသောင်းခင်၏ဖင်ကြားမှ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လျှာဖြင့်ေAာက်မှAထက်သို့ ယက်လိုက်သည်။ 7.
မသောင်းခင် ခါးသွယ်သွယ်လေးမှာ တစုံတယောက်က ဖိချလိုက်သည့်ပမာေAာက်သို့ ပိုညွတ်ကျသွား၏။သတ္တ၀ါမှန်သမျှ ကာမသတ္တိကိုပင် Aခြေခံမူလဓာတ်ကြီးAဖြစ် Aမာခံထား၍ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ထားသည်ဖြစ်ရကား ကာမဆက်ဆံခြင်းမပြုမှီ ရှိရှိသမျှ ကာမAကြောများAစွမ်းကုနပွင့်လင်းနိုးထလာစေရန်Aလွန်လိုAပ်လှပေသည်။်ထိုAချက်ကို တင်ဦးနားလည်သဘောပေါက်၍ ယခုလည်း မသောင်းခင်ကို မလိုးမှီသူမ၏ ကာမAကြောများ နိုးထလာစေရန် Aစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။တင်ဦးက စောက်ဖတ်Aတွင်းသားစို့ စို့ နုနုတွေကို AားရေAာင်စုပ်ယက်ပြီးနောက် စောက်ဖုတ်Aုံကြီး Aပြင်ဘက်ကိုနှိုးဆွဖို AစီAစU်ပြောင်းလိုက်၏။့ ရာဂသွေးတွေ ဆူနွေးပြည့်လျှမ်းနေသောကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာAဆမတန် ဖောင်းကြွနေလေသည်။Aလွန်သမ်မွေ့ ဆန်းကျယ်သော ကာမAကြောတွေစုဝေးထားသည်ဖြစ်၍ နုရွနေသည်။စောက်ဖတ်ကြီးကိုကြည့်ရသည်မှာ Aလွန့် Aလွန့် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိလှပေသည်။တင်ဦးက ဖောင်းAိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ညိုးလက်မနှင့် Aသာစု၍ ညစ်လိုက်သည်။Aညိုရောင်သမ်းလျှက် Aရည်ကြည်တို့ ဖြင့် စိုလက်နေသော နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးနှစ်မွှာမှာ ပူးကပ်သွား၏။တင်ဦးက ပူးကပ်နေသော Aညိုရောင်နတခမ်းသား နှစ်လွှာကို လျှာပြားဖြင့်ပင့်ကာ ပွတ်ဆွဲလိုက်လေသည်။ှု…..Aီး…Aင့်….A….Aမေ့….Aား…ရှီး…ကျွတ်…ကျွတ….Aား..လား..လာ်းမသောင်းခင် ဖင်လုံးကြီး၂လုံးမှာ Aထက်သို့ ကြွတက်သွားပြီး တဆတ်ဆတ်လှုပ်ခါသွားသည်။တင်ဦးက စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်မွှာကို သူ နှုတ်ခမ်းသားဖြင့် ဘေးတိုက်AနေAထားမှ ဖိငုံလိုက်ပြီ့း လျှာဖျားထိပ်နွေးနွေးကြီးဖြင့် တို ၍တို့ ၍ ဆွပေးလိုက်သည်။့ ……Aင့်…Aင့်…ကျွတ်…ကျွှတ်….Aမေ့….Aား…ရှီး….Aား…လား…လား…မသောင်းခင် ဖင်Aိုးကြီး၂လုံးမှာ Aထက်ေAာက်လှုပ်ရမ်းလျှက် တချက်တချက် ကော့ကော့တက်သွားသည်။တင်ဦးက သူ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိညပ်ထားသော စောက်ဖုတနှုတ်ခမ်းသား၂လွှာAကြားသို့သူ့ လျှာကြီးကိှု့်ထိုးထဲ့လိုက်လေသည်။နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာက ဖိထားသည်ဖြစ်ရာ သူ လျှာက Aားနှင့်ပွတ်၍ ၀င်သွားသည့်Aတွက် Aကြောတွေကို့ လှုပ်ဆွနှိုးဆော် သလိုဖြစ်သွားသည်။……Aီး…Aီး….Aစ်…Aစ်….Aင့်……Aမလေး…Aား….Aား….ထိုက့သို့ကြပ်ကြပ်သိပ်သိပ်AနေAထားမှာပင် သူ့ လျှာကို ကြုံ့ ၍ ကား၍ထိုးဆွမွှေနှောက်ပေးလိုက်ရာ…..ဲ…Aမလေး….Aီး….Aား….Aမလေး…..သေ..သေတော့မယ်….Aား…….ကျွတ….ကျွတ်…..Aမေ့…..Aမယ်လေး…..ကျွတ်….ကျွတ်…..်မသောင်းခင်တကိုယ်လုံးရှိ Aရေပြားတွေပေါက်ကွဲ စုတ်ပြတ်သွားမတတ်ကောင်းလွန်းရကား ဖင်Aိုးကြီးနှစ်မွှာက တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလျှက်ရှိသည်။ပြီးတော့ သူမညာဘက်လက်ဖြင့် ဘယ်ဖက်နို့Aုံကြီးကို ကြေမွလုနီးပါး ဆုတ်ချေပစ်လိုက်မိပါတော့သည်။……Aီး….ဟီး…..Aမေ့…..Aမလေး….ကို....ကိုတင်ဦး….လိုးပါတော့ရှင်…..ကျ…..ကျမ…သေ…သေတော့မယ်….ရှီး…ကျွတ်..ကျွတ်….ကောင်းလိုက်တာ…လိုးပါတော့….ရှင်…….မနေနိုင်တော့ဘူး……ဤသို့ မိန်းမကိုယ်နှိုက်က AသဲAသန် မချိမဆန့် တောင်းဆိုလာမှ လိုးမည်ဆိုလျှင် မည်မျှကြီးသောလီးပင်ဖြစ်စေကာမူ Aလိုးခံနိုငသွားတော့သည်။်လိုးတတ်လျှင် မည်သည့်AနေAထားနှင့်မဆို လိုးနေပေသည်။ယခုလည်း တင်ဦးသည် နောက်သို့ ဖင်ကြီးကုန်း၍ဖီလင်တက် ရမ္မက်ကြွ တဏှာရာဂတွေထလျှက် ရှိသောမသောင်းခင်ကို ပုံစံပြောင်းလိုက်လျှင် Aာရုံပျက်သွားမည်စိုး၍ သည်AနေAထားAတိုင်း လိုးပေးတော့မည်ဟု 8.
ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။တင်ဦး ဆက်တီခုံပေါ်ကဆင်းပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ညာဘက်ခြေထောက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထားပြီး ဘယ်ဖက်ကဆက်တီခုံပေါ်သို့ တင်လိုကသည်။်သူ့လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်A၀နှင့် Aံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သားသည်။ွထို့နောက် ၀င်းပြောင် စွင့်ကားနေသော တင်ပါးကြီးကို လက်ဝါးနှင့် ဖြန်းကနဲသ၏လက်ဖြင့် ရိုက်လုက်သည်။ိူမသောင်းခင် တကိုယ်လုံး ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားသည်။တင်ဦးက လီးတန်ကြီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်၍ စောက်ဖုတ်ထသို့ ထိုးမသွင်းသေးဘဲ စောက်ဖုတ်Aကွဲကြောင်းတလျှောက်ဲကိုကလိလိုက်လေသည်။လီးကို လက်ဖြင့်Aဖျားမှ ကိုင်၍ မသောင်းခင် ဖင်ကြီးပေါ်နှင့်စAိုဝနားတ၀ိုက် ကိုရိုက်လိုက်လေသည်။စိတ်၏ သဘာဝမှာ Aာရုံနှစ်မျိုးကို တပြိုင်နက်ဖမ်းယူကျက်စားနိုင်ရိး ထုံးစံမရှိပါ။ုစောက်ဖုတ်Aတွင်း လှိုက်၍ ကောင်းနေသောဝေဒနာကို ခံစားနေရာမှ ဖြန်းကနဲပုတ်ထ့လိုက်သော AထိAတွေဲ့Aာရုံဆိသို့ ဗြုန်းကနဲ ရောက်သွားလေသည်။သည်Aခိုက်မှာ တင်ဦးက သူ၏လီးတန်ကြီးကို ဖြေးညင်းစွာ လိုးထည့်လေတော့သည်။…….ခင်…ကိုယ်ကို နဲနဲကြွလိုက်ပါလား….နို့ပါကိုင်လို့ရေAာင်…..မသောင်းခင်က လက်တနှိုက်စာ ကောင်းကောင်းကြီးဝင်လို့ရသည်Aထိ ကြွပေးလိုက်သည်။တင်ဦးက ပို၍သေချာစေရန် နှိုက်စမ်းရင်း နို့Aုံတင်းတင်းAိAိကြီး ကို ဆုတ်ချေပွတ်ဆွလိုက်သေး၏။သည်တော့ စောက်ဖုတ်ထဲေAာင့်သက်သက်ဖြစ်နေသော ဝေဒနာက ဖျတ်ကနဲ ပျေက်ကွယ်သွားပြန်သည်။တင်ဦးက သူ့လီးတန်ကြီးကို သည်Aတိုင်းAဆုံးထိမြှုပ် ထားလျှက်ကပင် နို့Aုံကြီးကို ဆက်လက်၍ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။ထို့Aခိုက်မှာ စောက်ဖုတ်နှင့် လီးတို့က သဟဇာတ မဟာမိတ်ဖြစ်သွားကြတော့သည်။တင်ဦးက ဤမျှAထိ ကျွမ်းကျင်၏။ထို့ကြောင့် မိန်းမပင် တရားဝင်မယူဘဲ လိုးခွင့်ရသော မိန်းမတို့၏ Aလိုဆန္ဒကို Aားရကျေနပ်သည်Aထိသဘောထားကြီးစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက် ရှိပါတော့သည်။တင်ဦးAရေ၀င်သွားသမျှ မိန်းမတို့မှာ သူ့ကိုAသေခင်သွားတတ်ကြသည်။တင်ဦးက ၀င်းAိတင်းမို့နေသော နို့Aုံကြီးကို ဆုတ်ချေနေရာမှ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မသောင်းခင်ခါးကိုတင်းနေေAာင်ကိုင်လိုက်လေသည်။ထို့နောက်Aဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားသော သူ့လီးကြီးကို တ၀က်ကျော်ကျော် ပြန်ဆွဲနှုတ်လိုက်လေသည်။တင်ဦးလီးကြီးက Aရှည် ၈ လက်မခန့်ရှိပြီး Aတုတ်က ၅ လက်မကျော်ကျော်ရှိရာ စံချိန်မှီရုံမျှမကစံချိန်ပင်လွန်ထွက်နေပါတော့၏။ဤကဲသို့ဖြစ်လာရန် လေ့ကျင့်မှုတွေ တောက်လျှောက်လုပ်ခ့ရလေသည်။ယခင်က သူ့လီးမှာ ၅ လက်မသာဲ့ခန့်သာရှိ၏။ ယခုလောက်လည်း မတုတ်သေး။တင်ဦးတယောက် ဤကဲ့သို့ ကာမဗဟုသုတတွေ Aထိုက်Aလျှောက်သိရှိနားလည်ထားခြင်းမှာEရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတာရိုးကွေ့Aနီးရှိ ဗြဟ္မဏဗိမာန်မှ ဘာဘူကြီးက သင်ပြထား၍ဖြစ်သည်။တင်ဦးက Aလုပ်Aားတိုင်း ဘာဘူကြီးထံသွား၍ ဘာဘူကြီးပြောသမျှ နားထောင်လေ့ရှိသည်။ဘာဘူကြီးလေ့ကျင့်ခိုင်းသော ကာမသျှတရစာAုပ်ပါ PCမာဆယ် လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလည်း မပျင်းမရိလေ့ကျင့်ခသည်။့ဲဘာဘူကြီးထံမှ လီးကြီးကျင့်စU်များကို ရလိုက်လေသည်။တနေ့ ၃ ကြိမ် မိမိ Aင်္ဂါဇာတ် ကို ဂွင်းတိုက်သလို လှုံ့ဆော်ပေးရမည်။Aရှိန်ပြင်း၍ သုတ်ထွက်ခါနီးလျှင် ရပ်ဆိုငးထား။်လေ့ကျင့်ချိန်ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် ရှိစေရမည်။ဤနည်းဖြင့် သူ့လီးကို ကြီးထွားသန်မာစေခဲ့၏။ထို့သို့ Aမြဲတမ်း သန်မာထွားကြိုင်းနေစေရန်ဗူးသီးAနှစနှင့် ကျီးသီးAဆံမှုန့်ကို သမေAာင်နယ်၍ Aုံပေးရသေးသည်။်ထိုမျှမက တောAရက်ဦးရေ(ထနောင်းခေါက်နှင့် ချက်သောAရက်)နှင့် ဆေးမြစ်စုံAမှုံ့ကို 9.
ဖျော်စပ်ပြီးသုတ်လိမ်းကာ လက်ဝါးနှစ်ဖက်နှင့် ပွတ်၍ လှိမ့်လှိမ့်ပေးရသည်။နောက်ပြီး ကင်းလိပ်ချောဆီနှင့်လည်း ပွတလိမ်းဆွဲဆန့်ပေးရသည်။်ထို့Aပြင် တောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို ပေါင်နှစ်လုံးကြားသွင်းညှပ်၍ ခါးကိုကော့ကာကော့ကာဆန့်ပေးရသည်။Aကြောသန်ဆေးAဖြစ် ခရမ်း ၅ မျိုးAမြစ်နှင့် စိမ်ထားသော Aရက်ဦးရေကို တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်သောက်သောက်ပေးရသည်။ထို့နေ့မျိုးတွင် ကာမဂုဏ် မေထုနဆက်ဆံခြင်း လုံးဝမပြုရဟု ဘာဘူကြီးကဆို၏။်ဤကဲသို့ စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသည့် Aတွက် တင်ဦးလီးကြီးမှာ Aမြဲတန်း တက်ကြွလန်းဆန်းနေ၏။့ ထို့Aပြင် သူ့မှာ စည်းကမ်းတစ်ခုရှိသေး၏။ မိန်းမဖင်ရော၊Aခြောက်ဖင်ရောလိုးလေ့မရှိ။သဘာဝမဟုတ်သော လိင်ဆက်ဆံမှုဖြင့် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကပိုများသည်ကိုဘာဘူကြီး၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုဖြင့် တင်ဦးက Aပြည့်A၀ လိုက်နာ၏။ယခုခေတ်တွင် သမီးရည်းစားများကြားတွင်၊Aိမ်ထောင်သည်များတွင်လည်းနောက်ပေါက်တွယ်စီးခြင်းမှာ စတင်ခေတ်စားလာနေသည်ကို သိရိရသည်။ှမိမကို ချစ်ခင်သဖြင့် လိုက်လျောသော်လည်း ယောက်ျားများAနေဖြင့် မိမိ ချစ်သူ၊ိမိနးမကို Aမှန်တကယ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးပါက ထိုကိစ္စကို ရှောင်ကြည်သင့်လှပေသည်။်တင်ဦးမှာ မိန်းမများဆန္ဒကို ဦးထိပ်တင်ထားသဖြင့် နွားသိုးကြိုးပြတ်လိုးနည်းကို လည်းရှောင်ကြည်လေ့ရှိသည်။မိန်းမကို ကျကျနန နူးနပ် နှိုက်ဆွ စုပ်ယက်ပြီးမှ ဆက်ဆံလေ့ရှိသည်။ဘာဘူကြီးက…….မိုက်မြူဖျင်းသုန်ကာမဂုဏ်ဟုမေထုန်လွန်ကြူးပျော်မမြူးနှင့်……..ဟူသော လင်္ကာကို ရွတ်ပြ၍ ကာမဆက်ဆံမှု လွန်ကဲခြင်း ကာမဂုဏ်သောင်းကျန်းခြင်း၏ Aပြစ်တို့ကုလည်ိးပြောပြသည်။ထို့Aပြင် သုတ်၏တန်ဘိုးကိုလည်း ပြောပြသည်။……သုတ်ကို ဗလရုပ်လို့ခေါ်တယ်ကွဲ့……စားသောက်သမျှAာဟာရတွေဟာ….ကိုယ်Aတွက် လိုAပ်တဲ့ ရသဓာတ်ကို ဖြစ်စေတယ်…..AဲဒီAထဲက…နောက်ဆုံး Aဆင့် ရသဓာတ်ကတော့Aဆီသြဇာ Aလွန်ပြည့်တ့သုတ်ပ…..Aကြိမ်ပေါင်းများစွာ လှော်ပြီးတဲ့ရွေလိုပ…ဘာAညစ်Aကြေးမှဲမထွက်တော့ဘူး…ဒီသုတ်ဓာတ်ကို လွန်လွန်ကဲကဲ ကာမဂုဏ်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဖြုန်းတီးမပြစ်ရဘူး….ကိုယ်ခံAားတွေ နည်းပြီးရောဂါမျိုးစုံ..၀င်လာလိမ့်မယ်….ထိုAချိန်မှစ၍ တင်ဦးတယောက် သုတ်တန်ဘိုးကို နားလည်ပြီး ကာမပေါ်လစီတရပ်ချမှတ်ကာကျင့်သုံးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မိန်းမတွေ..ကိုယ်နှိုက်က လုပ်ပါတော့ဟုAသဲAသန်တောင်းဆိုလာမှသာ လုပ်လေ့ရှိသည်။သူဆက်ဆံပေးသည့် မိန်းမတိုင်းမှာ ကာမဆန္ဒပြည့်ဝယုံမျှမက ပျော့ခွေAီဆိမ့်သွားသည်Aထိ Aကောင်းကြီးကောင်းခဲ့ကြသည်။ထို့က့သို့လုပ်နိင်ခြင်းမှာလည်းတင်ဦးမှာ သူများထက်ထူးပြီဲးု(၁)လီးကြောသန်၏။ 10.
(၂)လိုးကြောရှည်သည်။(၃)သုတ်ကို Aကြာကြီးထိန်းထားနိုင်၏။(သုတ်ကို Aကြာကြီးထိန်းနိုင်ရန်မော်ဒန်ကာမသျှတရစာAုပ်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းများကို Aချစ်ရွာသစ်တွင်သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာ နိုင်ကြပါကြောင်း…ဤကားစကားချပ်)ယခုလည်း တင်ဦးက သူ့လီးကြီးကို တ၀က်ကျော်ကျော်ဆွဲနှုက်လိုက်သည် ဖြစ်ရာ ၈ လက်မခန့်ရည်သော လီးကြီးမိှု့စောက်ဖတထဲတွင် ၄ လက်မခန့် ကျန်ရှိနေပေသေးသည်။ုထို ၄ လက်မAကျန်ဖြင့်ပင် Aသွင်းAနှုတ်ကို ခပ်သွကသွက်လေးလုပ်ပေးလိုက်သည်။်ယခုကသို့ တ၀က်ခန့်သာ သွင်းပြီး ခပ်သွကသွက် ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေရာမှ့ဲ်လီးတန်ကြီးကို Aဆုံးထိသွင်း တ၀က်နှုတ် Aဆုံးထိပြန်သွင်းနည်းဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းလိုးလျှက်ရှိရာAသံတွေကလည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ထွက်လာပါတော့သည်။……ဘွတ်…ဖွတ်….ဖွပ်…ပလွတ်…ဖွတ်….ဘွတ်….ဗြစ်….ဖွတ်…ပလွတ်….စောက်ဖုတ်နှင့်လီး Aဆက်မပြတ် ထိတွေ့ပွတ်တိုက်ရာမှ Aသံတွေ ထွက်ပေါ်နေသလို…..Aင့်…Aား…Aမေ့…ရှီး…ကျွတ်…ရှီး…Aား..လား..လား…ပြင်းထန်ထိမိသော ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ကောင်းလွန်းလှသည်ဖြစ်ရကား မသောင်းခင်နှုတ်မှလည်းကာမညီးသံတွေ ကျူးရင့်လျှက်ရှိနေပါတော့သည်။တင်ဦးက ဆောင့်သည့်Aရှိန်ကို သိသိသာသာလျှော့ချလိုက်သည်။သည်တော့ Aသံတွေလည်း တိုးတိတ်သွားသည်။ ထိုစU် မသောင်းခင်က တစခန်းထလာပြန် တော့သည်။သူမ တင်ပါးဆုံကြီးကို ထက်ေAာက်မွေ့ရမ်း၍ ကော့ကော့ပေးလာသည်။တင်ဦးက နပ်သည် ဒီAခြေAနေမျိုးတွင် တော်ရုံလူခံနိုင်လေ့ မရှိ။စောစီးစွာ ပြီးသွားတတ်သည်။သူမက Aားနှင့်မာန်နှင့် စကောဝိုငးသလိုမွေပေးနေသလောက့််တင်ဦးက ဖင်ဆုံAိုးကြီးကို ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်ရင်း နှေးနှေးမှန်မှန်သာ လိုးပေးနေသည်။….Aင်း…Aင်း…Aင့်…Aင့်….Aား…Aား…ရှီး….Aား….Aား….မသောင်းခင်တယောက် ကြမ်းသထက်ကြမ်းလာ၏။တင်ဦးက လှုပ်ခါနေသော ဖင်Aိုးကြီးကို ငုံ့ကြည့်ရင်း ငါးဖယ်ပြုံးပြုံးလိုက်သည်။တင်ဦးလည်း မသောင်းခင်တယောက် AခုလိုAတော်ကြာကြာဇိမ်ဆွဲခံနိုင်ပုံကို AလွနAံသြနေ၏်တချိုမိန်းမတွေ ဆိုလျှင် သူ့ပါးစပ်နှင့်ပင် ၂ ချီ လောက်ပြီးသွားတတ်သည်။့ ကာမဘီလူးက မသောင်းခင်ကို Aစွမ်းကုန်ပူးကပ်လိုက်ပြီထင်၏။သူမ၏ တန်ပြန်ဆောင့်ချက်တွေက မီးပွင်မတတ် မြန်ဆန်လာလေသည်။့ ….ဖွတ်…ပလွတ်….ပလွတ်….ဗြစ်…ဖွတ်…Aင့်…Aား…Aင့်….ရှီး….Aသံတွေလည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ထွက်လာ၏။တင်ဦးက မသောင်းခင်တင်ပါးဆုံကို လက်ဖြင့်ကိုင်ရင်း လီးတန်ကြီးကို ဘယ်ညာစောင်း၍ လိုးပေးနေလေသည်။မသောင်းခင်ကလည်း သူမ၏တင်ပါးဆုံကြီးကို နောက်သို့တန်ပြန်ဆောင့်လေသည်။မသောင်းခင်တယောက် ပြီးကာနီးပြီမို့ ရမ္မက်ဇောတွေ ထန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ဦးက သိလိုက်သည်။ထို့ကြောင့် ခါးကိုAနည်းငယ်ကုန်း၍ သူ့ဘယ်ညာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မသောင်းခင်၏ နို့Aုံကြီးနှစ်မွှာကို တင်းနေေAာင်ဆုတကုင်လိုက်သည်။်ိပြီးတော့ ဖွချေလိုက်သည်။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုမှ Aားရပါးရ Aသားကုန်ကြုံး၍ ဆောင့်ပါတော့သည်။…..ဖွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဖွတ်….Aား…Aား…Aီး…Aား… 11.
Aမလေး….Aင့်…ကျွတ်….ကျွတ်…ကောင်းလိုက်တာကိုရယ်…..Aသားတွေတုန်တယ်......ဖြန်း…ဖြန်း….တင်ဦးကလိုးရင်းဖြင့် မသောင်းခင်တင်ပါးပေါ်သို့ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ရိုက်ချလိုက်လေသည်။……..ဖြန်း….ဖြန်း….Aား….Aိုး…..ကောင်းလိုက်တာ…ခင်ရယ်….ဖင်ကြီးကိုနောက်ကို…နာနာဆောင့်စမ်းပါ…..Aိုး….ရှီး….မသောင်းခင်နှင့်တင်ဦးတို့၏ ကာမပန်းတိုင်သို့ Aတူချီတက်နေပုံမှာ စည်းချက်ညီလှပေသည်။တင်ဦးက မသောင်းခင်တင်ပါးကြီးကို လက်ဖြင့် စုတ်ကိုင် ဖြန်းကနဲရိုက်လိုက်ဖြင့် လိုးပေနေသလိုမသောင်းခင်ကလည်းသူမ၏ စွင်ကားနေသော တင်ပါးဆုံကြီးများကို စကောဝိုင်းသလို လှည့်ပေးလိုက်ခါးကိုညွတ်၍ ဖင်လုံးကြီးများကို့ ထက်ေAာက်နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ဖြင့် Aစွမ်းကုန်လိုးနေကြပေသည်။…..ဖွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ပလွတ်…Aား…Aား…ရှီး…Aိုး….ကောင်းလိုက်တာ…ကိုရယ်…..ခင်ပြီးတော့မယ်….နာနာဆောင့်စမ်းပါ…..Aား..လား…လား…ဟုတ်ပီ…ခင်…..Aား….Aား….Aီး….ကျွတ်….Aိုး………A…A……ဤသို့ေAာ်ဟစ်သံတွေ၏ Aဆုံးတွင် ဟင်းကနဲ Aသံကြီးမြည်ပြီး တကိုယ်လုံးဓာတ်လိုက်သလိုတုန်ခါသွားလေသည်။ပူနွေးစေးပြစ်သော စောက်ရေတွေလည်း ဗျင်းကနဲဗျင်းကနဲ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။တင်ဦး လီးကြီးကလည်း သုတ်ရေများကို မသောင်းခင်စောက်ဖုတ်Aတွင်းမှာပင် ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။စောက်ဖုတ်Aတွင်းကြွက်သားတွေက တင်ဦး၏ လီးထိပ်ဖူးကြီးကို Aားသန်စွာညှစ်ညှစ်ပေးလေရာတင်ဦးတယောက်ကော့တက်သွားလေသည်။မသောင်းခင်စောက်ဖုတ်Aတွင်းသားများ၏ ညှစ်Aားမှာ တင်ဦး၏ လီးထိပ်ဖူးကြီးမှသုတ်များကိုAကုန်Aစင် ညှစ်ယူလိုက်ရာ ပူထူရှိန်းကြွသွားပြီး ကျU်ဆိမ်Aီတက်သွားလေသည်။့ တင်ဦးတယောက် မခံနိုင်တော့ဘ…..Aား…ကနဲေAာ်လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီး ကို စောက်ဖုတ်Aတွင်းသိုဲ့တချက်၂ချက်လောက် ဆောင့်လိုက်ပြီး ပြီးသွားလေသည်။(ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) ချမ်းမြေ့သာဇံမောင်မောင်နှံဦးလူကျော်တယောက် မသက်သာ၍ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းလာသည်မှာ ၃ ရက်ခန့်ရြှိ ပီ။မသောင်းခင်ကလည်း စေတနာပါပါနှင့် ပြုစုပေးပါသည်။လစ်သည့်Aချိန်တွင် တင်ဦးနှင့် နှစ်ပါးမြူးတူးAပျော်ကျူး၍ Aလိုဆန္ဒပြည့်ဝေAာင်ခံစားကြသည်။ ဦးလူကျော်သားသမီးများက တခါတခါမှသာ လာကြတော့သည်။တနေ့ဦးလူကျော်ကို Aဝတ်Aစားလဲပေးပြီးနောက် ဆေးလိမ်းပေးနေစU် ဦးလူကျော်ကသူ့ခေါင်းAုံးေAာက်မှာရှိသော သော့ကို Aနည်းငယ်လှုပရှားနိုင်သေးသော်ညာဘက်လက်ဖြင့် ခဲယU်းပင်ပန်းစွာဖြင့်ပေးပြီး မသောင်းခင်လက်ထဲ ထည့်ပေးသည်။ထို့နောက် မီးခံသေတ္တာဘက်မေးငေါ့ပြ၏။ပါးစပ်ကလည်း ဗလုံးဗထွေးနှင့် ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ။မသောင်းခင် ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည်။…….မီးခံသေတ္တာ….ဖွင့်ရမှာလားAကိုကြီး………..ဦးလူကျော်က ခေါင်းငြိမ့်ပြ၏။မသောင်းခင် မီးခံသေတ္တာဖွင့်လိုက်သည်။Aပေါ်ထပ်မှာ စာချုပ်စာတမ်းတွေ။Aလည်ထပ်မှာ လက်ဝတ်ရတနာတွေ။ေAာက်ထပ်မှာ ရွှေချောင်းနှင့်ထောင်တန်ငွေစက္ကူတွေ Aပြည့်တွေ့ရသည်။ 12.
ဦးလူကျော်က ပြန်ပိတ်ဖို့AမူAယာပြလိုက်သည်။မသောင်းခင် မီးခံသေတ္တာပြန်ပိတ်ပြီး ဦးလူကျော် နားလာထိုင်၏။သော့ကို ဦးလူကျော်လက်ထဲပြန်ထ့ရာ ဦးလူကျော်က ခေါင်းရမ်းပြပြီး သိမ်းထားခိုင်းသည်။ဲမသောင်းခင်က ဦးလူကျော်၏ ပါးပြင်ကို ကြင်နာယုယစွာပွတ်ပေးရင်း…………စိတ်ချမ်းသာေAာင်နေနော်….Aကိုကြီး…ခင်တယောက်လုံးရှိတယ်….ခင်ပြုစုမာပေါ့….ခင်ကကိုကြီးရဲ့မယားဘဲ…ှ…မသောင်းခင် တကယ့်စိတ်စေတနာနှင့် ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ဦးလူကျော်ကို ကြည့်၍ မျက်ရည်တွေဝဲလာသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့Aပေါ်Aလွန်ချစ်၊Aလွန်ကောင်းသော ဦးလူကျော်မှာသူ့ရ့ခင်ပွနးလင်ယောက်ျားပင်မဟုတ်ပါလော…..ဲ်ဆေးAရှိန်ကြောင့်ထင်သည် ဦးလူကျော်တယောက် မျက်လုံးမှေးစင်းလျက် Aိပ်ပျော်သွားတော့သည်။သည်တော့မှ မသောင်းခင်က ညစ်ပေနေသောAဝတ်Aစားများကို သိမ်း၍ ခြေရင်းက သေးခွက်ကိုပါမကာရေချိုးခန်းထဲဝင်ခ့သည်။ဲရေမိုးချိုး Aဝတ်Aစားလဲပြီး ဦးလူကျော်Aခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာသောAခါ ဦးလူကျော်တယောက် ခေါ်လို့မရတော့။ဦးလူကျော်တယောက် သူချစ်လှသော မသောင်းခင်နှင့် သူ့ပိုင်ပစ္စည်းများကို ထားရစ်ခ့၍ တမလွနသိုဲ့်ခရီးထွက်သွားလေပြီ။ခေါင်းAုံးဘေးတွင် စာလေးတစောင်တွေ့၍ ဖတ်ကြည့်လိုက်မရာ…….ိ….ခင်….မီးခံသေတ္တာထဲက ပစ္စည်းတွေAားလုံး ခင့်ပစ္စည်းတွေချည့်ပဲ Aားလုံးခင်ပိုင်တယ်..ငွေစုစာချုပ်တွေလည်း ခင့်နာမည်နဲ့ လွှဲထားတယ် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းပါ ဘယ်သူစကားမှ နားမထောင်ပါနဲ့…..…………………..Aကိုကြီး လူကျော်….ဘယ်Aချိန်ကရေးထားသော စာမှန်းတော့မသိ။ပုံမှန်လက်ရေးဖြစ်၍ ကျန်းမာစU်က ရေးထားပုံရသည်။မသောင်းခင်စာကို တခေါက်ပြန်ဖတ်သည်။ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲလာသည်။သောကမီးတောက်က ပရိဒေဝမီးတောက်Aဖြစ်ပြောင်းကာ သူ့ယောက်ျား နာမည်ကိုခေါ်၍တAားေAာ်ဟစ်ငိုလိုက်ပါတော့သည်။တင်ဦးနှင့် Aလုပ်သမားများ Aားလုံးပြေးတက်လာကြသည်။ဦးလူကျော်Aလောင်းကိုေAာက်ထပ်ပြောင်းရြွေ့ က။ရေချိုးပေးကြ၊ပြင်ဆင်ပေးကြနှင့် AားလုံးAလုပ်ရှုပ်သွားကြသည်။ထိုညက ဦးလူကျော်Aလောင်းဘေးတွင် ဖဲဝုင်းဖြစ်၍ ဆူညံစည်ကားနေသည်။ိကိုးနာရီခွဲခန့်တွင် မသောင်းခင်Aိမ်ပေါ်ထပ်သို့တက်ခ့သည်။ဲမတက်ခင် ကွမ်း၊ဆေးလိပ်၊ Aရက်ဝယ်ရန် တင်ဦးလက်ထဲတွင်ငွေတသောင်း ပေးခဲ့သည်။ထိုသို့ပေးစU် Aကြည့်ခြင်းဆုံကြ၏။မသောင်ခင်၏ မျက်လုံးထဲတွင် တစ်စုံတရာကို ပြင်းပြင်းပြပြမွတ်သိပ်တောင့်တနေကြောင်း ပေါ်လွင်နေသည်။စူးရှတောက်ပသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် တင်ဦးကို တချက်ကြည့်ကာ Aပေါ်ထပ်သို့ တက်သွား၏။Aဆီတွေ စုလျှက်ထွားAိကားတင်းနေသော တင်ဆုံဖြိုးဖြိုးကြီးနှစ်လုံးက တင်ဦးကို ဖိတ်ခေါ်သွား၏။………………ကာမရောဂါ၊ဝမ်းတွင်းနာကား………ကုရာနတ္ထိ၊ ဆေးမရှိဘူး 13.
………မိမိပညာ ၊ သတိသာလျှင်………မဟာသြဓ ၊ ဆေးမည်စွရှင့်…..ဦးလူကျော် ဈာပနရက်လည်ပြီး နောက်တရက် ဦးလူကျော် သားသမီးများနှင့် မသောင်းခင်တုိ့ ပြဿနာAကြီးAကျယ်တက်ကြသည်။မသောင်းခင် က မီးခံသေတ္တာကို လုံခြုံသည့်နေရာတွင် ပြောင်းရွေ့ထားရာ ဦးလူကျော်သားသမီးများကစစ်လားဆေးလားလုပရာမှ ပြဿနာစတက်ခြင်းဖြစ်၏။်……..Aဖေ့……Aခန်းထဲက မီးခံသေတ္တာက ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ….ဦးလူကျော်သမီးAကြီးမ မေစီကျော်က မေးခြင်းဖြစ်သည်။……နေရာပြောင်းထားတယ်….ထားတဲ့နေရာပြ…..သော့ပါပေးစမ်း….မေစီကျော့်Aသံက ခပ်မာမာ….ခပ်ဆတ်ဆတ်။သည်တော့ မသောင်းခင်က ပြန်ပက်သည်။…..Aဲဒီကိစ္စက ညီးနဲ့ဆိုင်လို့လား….ငါ့Aဖေပစ္စညး…..ငါတို့မောင်နှမနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဟ့….ပိုင်းလုံးမရဲ့်ဲ…ေAာင်မယ်…AလေAလွင့်န့ရတဲကောင်မကများ ငါ့ကိုပိုင်းလုံးမတဲ့..ဲ့နင်ကဦးလူကျော်ရသမီးလား..မယားလားဟင်..Aကောင်မရဲ့….့ဲမသောင်းခင်စကားကြောင့် မေစီကျော် Aရှိုက်ထိသွားသည်။Aမှန်Aားဖြင့် မေစီကျော်သည် ဦးလူကျော်၏သမီးAရင်းမဟုတ်။မယားပါသမီးသာဖြစ်၏။မေစီကျော်က မသောင်းခင်ကို ပါးရိုက်မည်ပြုရာ Aားလုံးကဝိုင်းဆွဲထားကြသည်။….ကဲ…ကဲ…Aချင်းများမနေကြနဲ့…Aခုမှရက်လည်ပြီးစရှိသေးတယ်…မကျေနပ်ရင်သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ပြီးUပဒေနဲ့ရှင်းကြ…..ဤသို့ တင်ဦးက ဝင်ပြောသည်။ဤသို့ဖြင့် ဦးလူကျော် သားသမီးများက ပစ္စညးတွေကိုAပိုင်ကြံချင်၍ သူ့Aဖေကို သတ်ပြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။်သည်လိုနှင့် တရားရုံးရောက်ကြရ၏။မသောင်းခင်က ဦးလူကျော်ဆုံးသည့်နေ့က AခြေAနေကိုပြောပြပြီး သော့နှင့်စာကို ထုတ်ပြလိုကသည်။်ဦးလူကျော်လက်ရေးဟုတ်မဟုတ် သေသေချာချာ စစ်ဆေးကြ၏။ဟုတမှန်ကြောင်းသေချာတော့မှ မသောင်းခင်ကို Aနိုင်ပေးလိုက်ကြသည်။်Aမှုကို ၃ လ ရင်ဆိုင်လိုက်ရ၏။Aမှုနိုင်သောနေ့မှာပင် ကိုတင်ဦးနှင့်လက်ထပ်လိုက်လေသည်။ကိုတင်ဦးနှင့်လက်ထပ်ပြီး ၉လ Aရောက်တွင် ကျိုထားသော သံရည်ပူတွေလောင်းမိပြီးကိုတင်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြန်လေသည်။ထိုစU်က မသောင်းခင်မှာ ကိုယ်ဝန်Aရင့်Aမာကြီးနှင့်ဖြစ်လေသည်။သောက ပရိဒေဝတွေ နင့်နေေAာင် ခံစားရလေသည်။ရွာက သူ့Aမေနှင့်ညီမကို ခေါ်ထားရသည်။ 14.
လုပ်ငန်းကိုမူ သူ့မောင်က ဦးစီးလုပ်ကိုင်ပေး၏။သမီးလေးမွေဖွားပြီး တနှစ်ခန့် Aရောက်တွင် ကိုကျော်သီဟနှင့် လက်ထပ်ပြန်သည်။ကိုကျော်သီဟက မိန်းမပွေရှုပ်ရုံမျှမက Aရက်နှင့်လောင်းကစားပါ ပါသည်။ထို့ကြောင့် တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီး Aလုပ်ရုံရော Aိမ်နှင့်မြေပါ သိန်း ၃ ထောင်နှင့်ရောင်းလိုကသည်။်ငွေ Aားလုံးဘဏ်Aပ်ကာ ရွာသို့ခေတ္တပြန်လာသည်။ဤသည်ပင် ကျော်ဝင်းထောင်ကျဖို့ ကံကြမ္မာဖန်လာပါတော့၏။ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝကျော်ဝင်းခုတ်လက်စAပင်ကို လက်စသတ်ပြီး မသောင်းခင်ရှိရာ တဖက်တောင်စောင်းသို့ ချောင်းကို ဖြတ်ကျော်၍သွားလိုက်သည်။မသောင်းခင် မျှစ်စီးကို မေးငေါ့ပြရင်း……….Aပြန်မင်းလှည်းနဲ့….လိုက်ချင်လို့…ဟုပြောသည်။ကျော်ဝင်းကလည်း သူ့ညီမခင်ခင်ကျော်ကို ပိုးနေသူမို့….ဟုတ်က့…ရပါတယ်ဗျာ..ဲဒီမျှ စ်စီး ကျနော်သယ်ခ့မယ်လေ…ဲဟုမသောင်းခင် ကြည်ေAာင်ဖားလိုက်လေသည်။မသောင်းခင်က နောက်သို့လက်ထောက်ရင်း ခြေခင်းထိုင်နေသည်။Aင်္ကျီကို ဖောက်ထွင်း၍ရုန်းကန်ထွက်တော့မတတ် တင်းဖောင်းနေသော နို့Aုံကြီးကြီးနှစ်မွှာကို သူ့မျက်လုံးတွေကကြည့်နေမိ၏။ထို့Aပြင် တင်းတင်းရင်းရင်း ဝင်းဝင်းAိAိခြေသလုံးသားများကိုလည်း ကြည့်နေမိသည်သွေးသားနှင့် ကိလေသာရာဂါစိတ်ို့ Aပြန်Aလှန်ပူးပေါင်းမိကြပြီဖြစ်ရာသူ့မျက်လုံးAရောင်တွေက တလက်လက်တောက်လာပြီး ရမ္မက်လှိုင်းတွေထလာသည်။မသောင်းခင်တယောက် သူဆင်ထားသော ကိလေသာထောင်ချောက်Aတွင်းသို့ကျော်ဝင်းတယောက် Aခက်Aခဲမရှိ ရှောရှောရှူရှူ ဝင်လာသည်ကို စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြုံးလိုက်သည်။……Aင်း…ကျွတ်…ကျွတ်…ဗိုက်ကလဲေAာင့်လိုကတာ….်မသောင်းခင်လက်ထောက်ထိုင်နေရာမှ သူ့ဗိုက်ကို နှိပ်ရင်း ပက်လက်လဲကျသွားသည်။…..ဟာ…မမ…မမ….ဒုက္ခပါဘဲ….ကျော်ဝင်း ခြေမကိုင်မိ၊လက်မကိုင်မိဖြစ်ကာ မသောင်းခင်ခေါင်းကို ပွေ့မလျှက် သူ့ပေါင်ပေါ်တင်ထားလိုကသည်။်…….Aင်း…A…ကျွတ်….ကျွတ်……..မသောင်းခင်က သူ့ဗိုက်ကိုနှိပ်ရင်း ခါးကိုကော့၍ ညီးညူလိုက်သည်။သည်တော့ Aင်္ကျီနှင့် ထမီAကြား လက်တဝါစာမက ကွာဟသွား၏။ဖွေနုဝင်းUနေသော ဗိုက်သားပြင်နုနုကို မြင်လိုက်ရသောAခါ လူပျိုသိုးကျော်ဝင်းစိတ်တွေ ဟုန်းကနဲ ကြွတက်သွားပြီးရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည်။ရာဂစိတ်တွေက Aထွတ်Aထိပ်ရောက်ေAာင်တက်သွားပြီဖြစ်၍ သူ့ပေါင်ကြားရှိပုရသသဘာဝရုပ်ကိုယစားပြု လီးတန်ကြီးမှာ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကြောတောင့်တင်းလာ၏။ိ်….Aား….Aမလေး….ကျွတ်….ကျွတ်…… Recommended